"UmThengi kuqala" kufuneka ibe yiMantra | Martech Zone
"Umthengi Kuqala" Kufuneka abe yiMantra
NgoMvulo, Oktobha 2, 2017 NgoLwesihlanu, Oktobha 6, 2017 UDan Purvis
Ukuqinisa amandla obuchwephesha obuninzi obuninzi bokuthengisa obufumanekayo kukuhamba okuhle kweshishini, kodwa kuphela ukuba ugcina umthengi wakho engqondweni. Ukukhula kweshishini kuxhomekeke kwitekhnoloji, le yinyaniso engenakuphikiswa, kodwa ebaluleke ngakumbi kunaso nasiphi na isixhobo okanye isiqwenga sesoftware ngabantu obathengisayo.
Ukwazi umthengi wakho xa bengenguye ubuso ngobuso kuzisa iingxaki, kodwa umthamo omkhulu wedatha oza kuyidlala neendlela zokuthengisa abathengisayo banokufumana umfanekiso obanzi kunangaphambili. Ukulandelela iimetrikhi ezifanelekileyo kunye nokwenza uhlalutyo olufanelekileyo lweendaba zosasazo lwenza ukuqaphela abathengi bokwenyani ngokulula kunangaphambili kwaye inceda ekuphuculeni ukuqonda kwakho konke kubathengi.
Lulindele njani uMthengi kunye neNkonzo
Abathengi baba ngaphezulu kwe-savvy kwindlela abanokufikelela ngayo kwiimpawu, ngakumbi ngokukhula kweendaba zosasazo. Kwaye, emva koko, oku kuye kwathetha ukuba ulindelo lwabo lube lukhulu kakhulu. Eli bango akufuneki libonwe gwenxa ziimpawu njengoko lilinye ithuba lokubonelela ngenkonzo enkulu yabathengi kunye namava, kwaye ubonise umgangatho wenkampani yabo.
Inkonzo yabathengi yexesha lokwenyani sele iyinto eqhelekileyo, nge Olunye uphando lubonisa ukuba i-32% yabathengi balindele impendulo kwi-brand ngaphakathi kwemizuzu engama-30, nge-10% engaphezulu belindele into ebuyayo ngaphakathi kwemizuzu engama-60, nokuba kungexesha "leofisi" okanye ebusuku okanye ngeempelaveki.
Uluhlu lwezixhobo ze-martech ezifumanekayo zokuqokelela kunye nokuhlalutya idatha ziye zanceda kakhulu, kunye ne-analytics yewebhusayithi edityanisiweyo ecaleni kokulandela umkhondo wentlalontle, iziseko zedatha yeCRM, kunye nezibalo ezinxulumene nokukhuphela okanye iinombolo zokubhalisa. Umthamo omkhulu weentlobo ezahlukeneyo zedatha ivumela ukuchaneka ekuchongeni abathengi ekujoliswe kubo kunye nokwenza imikhankaso yakho ngokufanelekileyo.
Oku kuninzi ukuphatha kwaye ugcine ngaphezulu, kwaye iyaqondakala into yokuba uphawu lunokuba nzima ukugcina yonke into ilungile. Kungenxa yoko le nto ukutyala imali kubuchwephesha obuchanekileyo kubaluleke kakhulu kwaye kutheni ukusebenzisa izixhobo zobuntlola kunye nesoftware phaya inemicimbi. Ukukunceda ukuqhuba ulawulo lwakho lwedatha ukuze kuzuze abathengi bakho ezi zinto zilandelayo kufuneka zibe ziqwalaselwe.
Ukwazi ukuba abo bakhuphisana nabo benza ntoni kubalulekile ekufumaneni amalungelo kunye nokungalunganga kwishishini lakho. Ungabeka abo ukhuphisana nabo ngokulandela nje impumelelo kunye nokusilela kwabo ngokusondeleyo kwaye ucofe izinto ezithandwayo nezingathandwayo ngabaphulaphuli abangaphezulu kwabaphulaphuli.
Ukulandela umkhondo kukhuphiswano kunye nokwenza umlinganiso kukuvumela ukuba ufumane isikhundla sakho kumzi mveliso wakho kwaye usebenzele ukuphucula apho kufanelekileyo. Ungahlalutya uhlobo olufanayo lweemetrikhi kwimisebenzi yoluntu okhuphisana nayo njengoko usenza eyakho, ulinganisa i-metric ezingento ngokuchasene nedatha ebonakalayo onokuyibhikica.
Ukujongwa kwabaphulaphuli ekujoliswe kubo
Ngolwazi oluninzi malunga nabaphulaphuli bethu abafumanekayo, akukho sizathu sokungawenzi umxholo kunye nokuhambisa amava abathengi awodwa. Kulo mzekelo wempahla kunye negama lasekhaya elilandelayo kunokwenzeka ukuba ubone njani Ukuqonda umdla wabathengi babo kunokubanceda bacwangcise iphulo elizayo.
Le datha inokubonakala ngathi ayinangxaki kodwa akunjalo. Ukujonga ngokusondeleyo kwidatha kaSotrender, ibonisa Okulandelayo ngokuthe ngqo apho baya kuthatha khona amaphulo abo kwixa elizayo kwaye zeziphi izihloko ezinokuthi zibandakanye abaphulaphuli babo ngokufanelekileyo. Ukufumana olu lwazi kubalulekile ekucwangciseni imikhankaso yexesha elizayo kunye nokunceda ekuqinisekiseni ukuba bakweyona ndawo iphakamileyo yokuzibandakanya.
Bafuna ntoni abathengi bakho? Unokuyazi into ofuna ukuyiphuhlisa kodwa ngaba abantu bafuna ntoni? Nokuba ingxelo engacelwanga kwimithombo yeendaba zentlalo inokusetyenziswa ngokufanelekileyo kuphuhliso lwemveliso kwaye unokukhetha ukuya kwelinye inyathelo kwaye ubandakanye abathengi bakho kuphuhliso lwemveliso yakho.
ICoca Cola ikwenzile oku kunye nabo Uphawu lweVitaminWater njengaye basebenze kunye ne-fanbase yabo ye-Facebook ukufumana umntu oza kunceda ukuphucula incasa entsha. Ophumeleleyo wanikwa i-5,000, 2 yeedola ukuze asebenze neqela lophuhliso ekwenzeni incasa entsha kwaye kukhokelele kumanqanaba amakhulu okuzibandakanya kunye nabalandeli abangaphezulu kwezigidi ezi-XNUMX zeVitaminWater Facebook abalandeli ababandakanyekayo kwinkqubo yophuhliso lwemveliso.
Ukuchongwa kweempembelelo kunye nokujolisa
Kuwo onke amacandelo ngoku kukho abachaphazeli abaphambili ababambe intlonipho enkulu kunye nengqwalaselo kuluntu oluku-intanethi. Amanqaku alwela ukuba anxibelelane naba baphembeleli, echitha ixesha elininzi kunye notyalo mali ukuqinisekisile abachasayo ukuba babhengeze kwaye baxhase imveliso yabo.
Ngamafuthe amakhulu kunye nabashukumisayo abakwimfuno ephezulu, ishishini lakho kufuneka lifumane abo banokuxhasa ishishini lakho kwaye bahambelana kakhulu nomthengi ekujoliswe kuye. Ngomntu 'ongumthengi wokuqala' wemantra kufuneka ujonge abachaphazeli abachaza into kubaphulaphuli bakho kwaye unokuba luncedo olongezelelekileyo kwimizamo yakho yokuthengisa, kunokuba "nabani na" onegama kunye nomlandeli onesidima. Ukuchonga abachaphazeli abafanelekileyo kwimpawu yakho kubaluleke kakhulu kwimpumelelo kubugcisa obufihlakeleyo ukuthengisa okunempembelelo.
Ufuna ukubeka uphawu lwakho njengenye abathengi abaziqhenyayo ngayo, kodwa ukufezekisa ubhengezo kufuneka ujolise ngokupheleleyo kubathengi. Kulula kakhulu ukusongelwa kwitekhnoloji kwaye ulibale imeko yomntu kwimizamo yakho yokuthengisa. Itekhnoloji ikhona ukunceda nokunceda ekuhambiseni awona mava mahle abathengi.
tags: ukubekauhlalutyo lwesincokoumthengi kuqalaFacebookUkujolisa kubaphulaphuli
Ukwahlula iRiphabhlikhi yaseBrand njengomnye wabaphembeleli abaphezulu be-50 UK yokuThengisa kunye neMithombo yezeNtlalontle, uDan Purvis unomdla wokuzisa umxholo, ukuthengisa kunye nokuthengisa kunye ukudibanisa amashishini nabaphulaphuli babo, ukuze ahambise ixabiso elibonakalayo leshishini kunye ne-ROI.